Le yindlela i-bumpers ejonge ngayo iApple Watch | Ndisuka mac
Siphetha usuku ngokufikelela kwi-yakho Apple Watch leyo, kude ekubeni sisixhobo sokuyisebenzisa ngokuqhubekekayo, ndiyayibona ilungile kwiimeko ezizodwa kunye ezithile apho ufuna ukukhusela iApple Watch yakho naphi na apho ukhoyo.
Ukuba ngenye imini ufuna ukuya ezintabeni okanye ngebhayisekile nge-Apple Watch yakho kwaye awufuni ukubethwa ngokungakhathali, ungakhetha ibhampasi. Sele i-iPhone 4 iApple idale lo mxholo kwaye ngoku lo mvelisi ucinga into efanayo.
Zininzi izinto zokukhusela ezifana nale siyibonisayo kweli nqaku kodwa bambalwa endikhe ndayibona kuyilo kunye nemibala enje kwaye iApple Watch yinto engaphaya kokufuna ukwazi nangona inento enkulu ngakumbi. Njengoko ubona sisigubungelo se Vula irabha kwicala lesikrini nakwinxalenye yeemvakalelo zangasemva kunye nendawo yesithsaba.
Ukufakwa kwayo kulula kakhulu kwaye kukuba njengesokisi yerabha kufuneka sifumane umzimba we-Apple Watch ngaphakathi. Ixabiso layo alikho phezulu kakhulu kwaye lelo kuphela 4,91 euro Unganayo nayiphi na indibaniselwano emihlanu ekhoyo yombala.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga noku, unokundwendwela le khonkco ilandelayo. Ngokuqinisekileyo lukhetho olufanelekileyo ukukhusela i-Apple Watch yakho kwiimeko ezinobungozi apho abanye abakhuseli besilela ukukhusela ngale ndlela kuba benzima okanye ngenxa yokuba bengagubungeli ngale ndlela sihambisa ngayo namhlanje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Yile nto i-bumpers ijongeka ngayo kwi-Apple Watch yakho
i "bumpers", ngubani owaziyo ukuba zithini, kodwa zikhangeleka zimbi, hayi, ezi zilandelayo 🙁
Bubuphi ubuyatha malunga neebumpers okanye ukuba iWatch iya kuwela emhlabeni, ukuba ibalulekile kwaye yintoni enye ekufuneka ikhusele iscreen esi sikrwitshiweyo kwaye sithathe ukubethwa.
Ityala lokhuseleko kunye nebhetri yangaphakathi yeApple Watch